सभामुखले बोलाएको बैठक शुरू, हैसियतको प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री गएनन्, अरु को को गए ? ⋆ afno sansar
सभामुखले बोलाएको बैठक शुरू, हैसियतको प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री गएनन्, अरु को को गए ?
प्रकासित : २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ११:१३
विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीको बैठक सुरु भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल भने अनलाइन माध्यमबाट सहभागी हुने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निमन्त्रणा पठाए पनि उहाँ सहभागी हुनुभएन् । विशेष गरी एमालेको संस्थापन पक्षले उक्त कार्यक्रममा आउन अस्वीकार गरेको हो ।
बालुवाटार स्रोतले संसद विघटन भएको अवस्थामा बोलाइएको उक्त बैठकको कुनै अस्तित्व नहुने बताएको छ । संसद नै नरहेको अवस्थामा बैठक बोलाउन सभामुखको हैसियत नभएको बालुवाटारको भनाई छ ।
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ११:१३